MORONDAVA : Raim-pianakaviana maty notifirin’ny dahalo teo amin’ny kibony · Aponga
MORONDAVA : Raim-pianakaviana maty notifirin’ny dahalo teo amin’ny kibony
Tsy mangalatra omby indray no ataon’izy ireo ankehitriny fa mamono ny tompon’omby mihitsy. Mirongatra noho izany ny famonoana olona any an-toerana amin’izao fotoana. Ny herinandro lasa teo dia raim-pianakaviana sady tompon’omby roa no maty notifirin’ny malaso tao amin’ny Kaominina ambanivohitr’i Analaiva.
Afak’omaly hariva tokony ho tamin’ny 7ora sy sasany dia raim-pianakaviana iray antsoina hoe Naina no maty noho ny tifitra variraraka nataon’ny andian-jiolahy azy teo amin’ny kibony. Voalaza fa teo am-pisakafoanana ilay lehilahy sy ny vadiny ary ny zanany kely telo no niharan’ny famonoana nahazo azy ity. Niditra avy hatrany ireo jiolahy nirongo fitaovam-piadiana ireto ka notifiriny teo amin’ny kibony ilay tompon-trano. Nandositra ny vadiny fa ireo zanany kosa tsy nisy sahy nihetsika teo am-pitoerana. Tsy nataon’ireo jiolahy na inona na inona ireo ankizy fa rehefa maty i Naina dia lasa nandositra izy ireo, raha ny fampitam-baovao azo.
Tsy nisy entana norobain’ireo olon-dratsy tao amin’ity tokantrano ity fa ny hamono io raim-pianakaviana io ihany no anton-dian’izy ireo tao an-toerana. Voalaza fa miompy omby i Naina ary teo an-tokotaniny ireo omby fa tsy nisy lasa na iray aza. Mihorohoro amin’ny firongatry ny halatr’omby ny mponina tany an-toerana teo aloha fa ankehitriny matahotra ny ainy izy ireo satria ny tompon’omby mihitsy no lasibatr’ireo dahalo amin’izao fotoana.
Mitovy amin’ny tranga nahazo an’i Naina ity ihany koa no nihatra tamin’i Makay tao amin’ny Fokontany Andronganomby, kaominina ambanivohitr’i Analaiva. Nidiran’ny andian-dahalo nirongo basy tao an-tranony ny raim-pianakaviana iray ary notifirin’izy ireo ity farany ka maty tsy tra-drano. Tsy nisy norobain’ireo olon-dratsy ny entana tao an-trano sy ny omby fa ny hamono azy io ihany koa no anton-dian’izy ireo tamin’izany. Hatreto tsy fantatra ny tena antony mahatonga izany rehetra izany fa efa eo am-pikarohana ireo nahavanon-doza ny mpitandro filaminana any an-toerana.